Uyini umehluko: Augmentin noma Flemoklav Solutab > Ukwelashwa nokuvimbela
U-Augmentin noma uFlemoklav Solutab - okungcono? Yini esingayilindela kule mishanguzo?
Flemoklav Solutab - amaphilisi we-oblong. Ziphuzi noma zimhlophe. Umuthi onjalo uqukethe i-ntho esetshenziswayo ye-amoxicillin trihydrate. Isithako esisebenzayo sikuvumela ukuthi ulwe namagciwane abangele i-pathology. Ibuye ibe nezakhi ezinjenge-sodium clavulanate, i-microcrystalline cellulose ne-vanillin.
Ingxenye esebenzayo yesidakamizwa uFlemoklav Solutab ikuvumela ukuthi ulwe namagciwane abangele i-pathology.
Amaphilisi atholakala emabhokisini amakhadibhodi. Ziqukethe ama-blisters ama-4.
Ngemuva kokusetshenziswa, umuthi udonswa emgudwini we-gastrointestinal. Ukudla kanyekanye akuthinti le nqubo. Umuthi uyakwazi ukulwa namagciwane a-aerobic gram-positive ne-gram-negative
Izinto ezisebenzayo zithathelwa phezulu esibindini. Zikhishwa yizinso esimweni esingashintshiwe.
Incazelo emfushane ka-Augmentin
I-Augmentin iyi-antibiotic ye-penicillin enobubanzi besenzo. Kubhekwa njenge-analogue ye-Ampicillin. Umehluko kuphela izinguquko ezincane ezihlelekile kwifomula: e-Augmentin, i-amoxicillin iqukethe isimo se-trihydrate.
Inzuzo enkulu yalo muthi izinhlobonhlobo zamafomu wokukhishwa. Ngakho-ke, kwenziwa ngesimo samathebulethi ne-powder, lapho kulungiswa khona isixazululo somjovo. Enye indlela yokukhululwa ukumiswa kwezingane. Lapho lo muthi ubekelwe ingane noma isiguli esikhulile, kufanele kubhekwe isisindo sesiguli.
Uma umthamo wesidakamizwa ukhethwe kahle, khona-ke akudingi ukuthi kufakwe amanye ama-antibiotic. Ukusebenza komuthi njenge-monotherapy ekwelapheni i-pneumonia kuqinisekisiwe. Kuyi-analogue enhle yama-antibiotic angawuchungechunge lwe-fluoroquinolone, afakwa ezinganeni. Ngakho-ke lesi sidakamizwa sisetshenziswa ngenkuthalo ezinganeni.
Ukulungiselela ukumiswa, kuyadingeka ukuncibilikisa i-powder emanzini. Ngasikhathi sinye, ukunakekelwa kufanele kuthathwe kungathululeli amanzi ngaphezu kophawu olungaphezulu, ngaphandle kwalokho ukumiswa okuvinjelwe kuzotholakala lapho into esebenzayo iqukethwe kumthamo ongaphansi kwesidingo - ukusebenza kwomuthi kuyobe sekuncipha.
Yikuphi okungcono - Flemoklav Solutab noma Augmentin
I-Flemoklav Solutab iqukethe izinto ezingadala ukusabela komzimba. Uma lesi sifo sabangelwa ngamagciwane anolaka, i-Flemoklav iyasetshenziswa, futhi ezimweni ezinzima kakhulu, i-Augmentin.
Le mithi iyafana esikalini. Ngakho-ke, uFlemoklav Solutab uqokwe:
Ngama-pathologies wezitho ze-ENT (pharyngitis, sinusitis, tonsillitis).
Uma kwenzeka ukuvuvukala okuhlangene ne-osteomyelitis.
Ukwelashwa kwezifo ze-gynecological.
Ngezifo zohlelo lwezitho zofuzo, ngokwesibonelo nge-cystitis.
Umuthi olwa namagciwane nawo usetshenziselwa ukwelapha izifo zesikhumba. Kuyasebenza ekwelapheni i-bronchitis.
UFlemoklav Solutab no-Augmentin babekelwe ukwelashwa kwezifo ze-ENT.
Isetshenziselwa ukwelapha izifo zezitho ze-ENT ne-Augmentin. Kuyasiza ngezifo ezilandelayo:
uma kwenzeka sepsis,
Umuthi usetshenziselwa ukwelapha i-osteomyelitis ne-pyelonephritis. Ngaphambi kokusebenzisa ithuluzi elinjalo, kuyadingeka ukubona ukuthi ama-microorganisms abangele lesi sifo angakwazi ukuwohloka.
Imithi yehluka ku-contraindication ukuyisebenzisa. I-Flemoklav Solutab ayivunyelwe ukusetshenziswa uma kunobunzima bezitho zayo ngazinye nange-jaundice. Kufanelekile ukulahla ukusetshenziswa kwayo uma umsebenzi wesibindi ukhubazekile. Okunye ukwephulwa kokusetshenziswa kwalesi sidakamizwa yi-mononucleosis esigulini, ngoba ukuqubuka kungavela.
U-Augmentin ungathandeki kwabesifazane abakhulelwe futhi abancelile. Kufanelekile ukulahla ukusetshenziswa kwayo uma kungenzeka ukwehluleka kwezinso nomlando we-colitis.
Omunye umehluko phakathi kwalezi zidakamizwa yimiphumela emibi evela ekusetshenzisweni kwazo. Ukusetshenziswa kwomuthi i-Flemoklav Solutab kungadala ubuhlungu besisu nohudo. Ngaphezu kwalokho, ukuthuthukiswa kokuthuthumela kwe-anaphylactic kanye ne-angioedema kungenzeka.
Ngenxa yokusetshenziswa kwe-Augmentin, kunemiphumela emibi efana nokuqunjelwa, ukuqhakaza. Ukwehlisa amathuba okuba nezimpawu ezinjengalezi, odokotela bangeze banikeze ama-eubiotic, afaka i-lactobacilli, esigulini. Ngakho-ke, ukwelashwa ngaleli gciwane kuhlanganisa ukusetshenziswa kwe-Acipol noma i-Linex.
U-Augmentin noma uFlemoklav Solutab: umehluko muni?
Ukuthola ukuthi le mishanguzo ihluke kanjani, kufanele uzijwayeze ngokwakheka kwamakhemikhali nezinye izici ngemininingwane ethe xaxa: izinkomba kanye ne-contraindication yokusetshenziswa, kanye nemiphumela emibi yokwelashwa.
Izinto ezisebenzayo zazo zombili lezi zidakamizwa ziyi-antibiotic evela eqenjini le-beta-lactam amoxicillin ne-clavulanic acid, evimbela ukubhujiswa kwayo. Inani lezithako ezisebenzayo lingahlukahluka ezinhlotsheni ezahlukene zemithamo nezindlela zemithamo.
I-Amoxicillin yigciwane elinezifo eziningi zomsebenzi we-antimicrobial. Isebenza ngokumelene namagciwane ajwayelekile okutheleleka kokutheleleka okuthelelekile. Isebenza ngama-bactericidal kuma-microorganisms e-pathogenic - okungukuthi, ayabhubhise.
I-Clavulanic acid isho ama-inhibitors (izinto ezinciphisa ukusabela kwamakhemikhali) we-enzyme ebhubhisa i-amoxicillin. Amagciwane amaningi we-pathogenic akhiqiza i-beta-lactamase, eyenza umuthi ungasebenzi, futhi i-clavulanic acid ivikela i-antibiotic ekubhujisweni.
Kumele ngisho ukuthi phakathi kwezidakamizwa kunomehluko kokufakwa kanye nokusatshalaliswa kwento esebenzayo. Ifomu lomthamo we-soluble linikeza ukufakwa okungcono komuthi endaweni yokugaya, ngakho-ke iFlemoklav Solutab imunzwa kangcono. U-Augmentin, amathebhulethi akhe ancibilika kuphela emathunjini, uvame ukudala imiphumela emibi evela ohlelweni lokugaya ukudla.
U-Augmentin noFlemoklav Solutab babekelwe izifo ezifanayo ezibangelwa amagciwane azwela le mithi elwa namagciwane:
ipheshana lokuphefumula elingaphezulu (pharynx, tonsils),
Izitho ze-ENT (izindlebe eziphakathi nendawo, ubuthi be-paranasal),
ipheshana lokuphefumula eliphansi (i-bronchi, amaphaphu),
izinso, ipheshana lomchamo,
I-Augmentin nayo ikhonjiswa ukuvuvukala kwamagciwane emathanjeni, amalunga, kanye nobuthi begazi.
ukungabekezeleli isidakamizwa nezinye izidakamizwa ze-beta-lactam,
ngaphansi kweminyaka engu-2
ukungasebenzi kahle kwesibindi se-amooticillin
izifo ezithathelwanayo zohlelo lwe-lymphatic.
ukungabekezeleli i-beta-lactams, i-clavulanic acid nezinye izinto zomuthi,
i-phenylketonuria - ukwephula ifa lokudalwa kokudla kwama-amino acid,
iminyaka yezingane ifinyelela ezinyangeni ezi-3 (yokumiswa okwesikhashana) noma kuze kube yiminyaka eyi-12 (yamathebulethi).
Khipha amafomu nentengo
I-Flemoklav Solutab yithebhulethi ye-dispersible (encibilikayo) enomthamo ohlukile wezithako ezisebenzayo:
125 + 31.25 mg, izingcezu ezingama-20 - ama-ruble angama-293,
250 + 62,5 mg, ama-20 ama-PC. - 425 rub.,
500 + 125 mg, ama-20 ama-PC. - 403 rub.,
875 + 125 mg, amayunithi ayi-14 - ama-ruble angama-445.
I-Augmentin itholakala ngezindlela ezimbili zemithamo:
amaphilisi ahlanganisiwe, ama-375 mg, ama-20 ama-pcs. - 246 rub.,
I-625 mg, amayunithi ayi-14 - ama-ruble angama-376,
875 mg, amayunithi angu-14 - ama-ruble angama-364,
I-1000 mg, ama-28 ama-pcs. - 653 rub.,
ukumiswa 156 mg / 5 ml, 100 ml - ama-ruble ayi-135,
200 mg / 5 ml, 70 ml - ama-ruble ayi-144,
I-400 mg / 5 ml - ama-ruble angama-250,
I-600 mg / 5 ml - ama-ruble angama-454.
U-Augmentin noma uFlemoklav Solutab - okungcono?
Naphezu kokwakheka okufanayo, kunokuhlukahluka okuthile phakathi kwale mishanguzo. Ukukhetha umuthi ofanele, kufanele uhlole izinzuzo zawo ngamunye.
igxilwa ngokushesha nangaphezulu ngokuphelele ngenxa yefomu lomthamo wokuncibilika,
mancane amathuba okubangela imiphumela emibi (ikakhulukazi isifo sohudo).
uhla olubanzi lwezinkomba,
inganikezwa izingane ezincane (ngesimo sokumiswa),
intengo engabizi kakhulu.
Okusho ukuthi, i-Flemoklav Solutab iyakhethwa izinkomba ezijwayelekile zokusebenzisa, kepha uma kwenzeka ukutheleleka kwamathambo noma amalunga, kanye nokwelashwa kwezinsana, kungcono ukusebenzisa i-Augmentin.
I-Augmentin iyi-antibiotic equkethe i-amoxicillin ne-clavulanic acid. Izindlela zokukhishwa zihlukile. Lokhu akuyona kuphela amatafula ajwayelekile ahlanganisiwe, kepha futhi ne-powder yokumiswa, isisombululo somjovo, njll.
I-Augmentin iyi-antibiotic equkethe i-amoxicillin ne-clavulanic acid.
Amathebulethi atholakala kumithamo ehlukene - 125 mg, 375 mg no-650 mg. Abahambeli - i-silicon dioxide, i-microcrystalline cellulose, i-magnesium stearate. Isikali sifana nomuthi wesibili okukhulunywa ngawo.
Ngabe uFlemoklav Solutab usebenza kanjani?
Igama elithi "Solutab" egameni lesidakamizwa libonisa ukuthi likhiqizwa kusetshenziswa ubuchwepheshe obusha. Ifomu lokukhishwa ngamathebulethi ahlakazeka, ancibilikiswa emanzini, lapho akha khona into enezintambo.
Umthamo ungahluka: I-125 mg ye-amoxicillin ne-31.25 mg ye-clavulanic acid, 250 mg no-62.5 mg, ngokulandelana, kanti isilinganiso esiphezulu ngu-875 mg no-125 mg. Izithako ezingeziwe - i-vanillin, iphunga le-apricot, i-magnesium stearate, i-microcrystalline cellulose, njll.
Ukuqhathanisa kuka-Augmentin noFlemoklav Solutab
Njengoba zombili lezi zidakamizwa zincike esenzweni sendawo eyodwa esebenzayo - i-amoxicillin, ehlanganiswe ne-clavulanic acid, umphumela wamakhemikhali, isilinganiso, ukuphambana kanye nemiphumela emibi yezidakamizwa ziyefana kakhulu.
Kepha kunomehluko, futhi obalulekile. Futhi kungenxa yobuchwepheshe bokukhiqizwa kwezidakamizwa.
I-Amoxicillin uhlobo lwe-penicillin. Ibulala amagciwane ngokuvimbela ukuhlangana kwezindonga zeseli. Ukuba khona kwe-clavulanic acid kuyadingeka ukucindezela ama-enzyme athile avimbela isenzo semithi elwa namagciwane. Mina. le ngxenye ivimbela ukuwohloka kwe-enzymatic ye-amoxicillin futhi inyuse ukusebenza komuthi.
I-Amoxicillin ne-clavulanic acid ziyasebenza ngokulwa namagciwane:
amagciwane we-aerobic gram-positive, kufaka phakathi izinhlobo ezahlukahlukene ze-streptococci ne-staphylococci, kufaka phakathi izicubu ezikhuthaza ama-enzyme angenhla,
ama-anaerobic gram-positive bacteria, kufaka phakathi i-clostridia,
amabhaktheriya e-aerobic gram-negative kanye nezinto eziphilayo ezilula - u-E. coli, uKlebsiella, uShigella, uProteus, uSalmonella, njll.
ama-anaerobic gram-negative bacteria.
Isinqumo ngokuqokwa kwezidakamizwa zezifo zokuphefumula noma ezinye izindlela zenziwa ngudokotela.
I-Amoxicillin, into esebenzayo ye-Augmentin neFlemoklav Solutaba uhlobo lwe-penicillin.
Zombili lezi zidakamizwa ziqukethe ukuhlanganiswa okufanayo kwezinto ezisebenzayo - i-amoxicillin + clavulanic acid. I-Amoxicillin iyisidakamizwa se-bactericidal esinokufakazelwa kokusebenza okuphezulu ezifundweni eziningi. Kusetshenziswa ekwelapheni kwezifo hhayi kuphela ipheshana lokuphefumula, kepha futhi nohlelo lwe-genitourinary. Umuthi olwa namagciwane uvezwa:
izifo ezithathelwanayo nezivuvukelayo zepheji yokuphefumula engenhla - i-sinusitis, pharyngitis, i-tonsillitis, njll,
inyumoniya etholwe ngumphakathi,
abitis otitis media kanye nezinye izindlela ezifanayo zezitho ze-ENT,
izifo ezithathelwanayo zamathambo, kufaka phakathi osteomelitis
izinqubo ezithathelwanayo zezingxenye ezingezansi zohlelo lokuphefumula, kufaka phakathi kuchaziwe ekwelashweni kwezifo ezingamahlalakhona njenge-bronchitis,
ezinye izifo ezithathelanayo zesikhumba (kufaka phakathi imiphumela yokulunywa yizilwane), izinso, isinye kanye nezinye izitho zohlelo lwezitho zofuzo (lezi yi-cystitis, pyelonephritis, njll., nazo izidakamizwa zisetshenziselwa ukwelapha izifo ezinjenge gonorrhea).
Naphezu kokusebenza okuphezulu, inhlanganisela ye-amoxicillin ne-clavunate inemiphumela emibi ebonakaliswa ngokuthatha lezi zidakamizwa zombili.
Ukungaphenduki okungathandeki kuboniswa umgudu wokugaya ukudla, onciphisa ukusebenza kwezokwelapha. Imvamisa, lapho uthatha i-Augmentin, uhudo kwenzeka. Ukuvela kwayo akuxhomeki ekutheni umuphi umthamo wezithako ezisebenzayo obekiwe, kepha esimweni sokukhishwa kanye nezimpawu zokutholwa kwezitho ezisebenzayo zomuthi, ngoba umuntu ngamunye angaba nalokhu okwehlukile. I-clavulanic acid ethakwa kakhulu emathunjini, lapho inciphisa ulwelwesi lwesisu, futhi amathuba emiphumela ayancipha.
Izidakamizwa zesimanje ezisuselwa ku-amoxicillin - ukusebenza ngempumelelo noma ukunyakaza
Yomibili le mithi, i-Augmentin neFlemoklav Solutab, iqukethe isithako esisebenzayo esiyingxenye ye-amoxicillin. Le yinto eyaziwayo ye-semisynthetic antibacterial yekilasi le-penicillin, elinokutholakala okuphezulu komlomo ngomlomo, ukutholwa okuhle, kanye nobuthi obuphansi.
I-Amoxicillin inomphumela we-bactericidal. Ngokudiliza ama-enzyme adingekayo ekwakheni izindonga zeseli ye-microorganism, kubangela ukufa kwayo. Kunamagciwane amaningi azwela isenzo se-antibiotic. Lezi yi-staphylococci gram-positive ne-streptococci, ne-gram-negative Escherichia coli, Shigella, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella nabanye. I-Amoxicillin iyasebenza futhi ngokulwa nazo zonke izinto ezincane ezibucayi be-penicillin.
Umuthi odumile "i-Amoxicillin" wenza izindleko zawo ziphansi futhi kungenzeka unqume iziguli zeminyaka ehlukile. Intengo yesidakamizwa ekhemisi isuka kuma-ruble angama-70 kwiphakeji lezingcezu eziyi-16. Manje kungani kwesinye isikhathi kunqunywa imishanguzo ebiza kakhulu ngaphezulu, ngokwesibonelo, i-Augmentin noma iFlemoklav, izindleko zazo zivela kuma-ruble angama-200 ngephakeji ngalinye?
Into ekhona ukuthi i-amooticillin ayishintshashintshi njengoba kubonakala ekuqaleni kokuqala. Amanye amabhaktheriya asevele ekhulise ukungasebenzi kwawo kwe-antibiotic. Bafaka iprotheni ekhethekile - i-beta-lactamase - ebhubhisa ukwakheka komuthi, futhi inciphise kakhulu ukusebenza kwawo. Ukunciphisa amasosha omzimba wokuzivikela, amagciwane abekelwa i-clavulanic acid ngokungeziwe ku-amoxicillin ekwelapheni izifo ezithile. Ibhubhisa izibopho zamaprotheni futhi ivikele ingxenye eyinhloko ekuwohlokeni.
Ukwengezwa kwe-potasium clavulanate ekwakhiweni kwehlukanisa amalungiselelo weFlemoklav Solutab noFlemoxin Solutab.
Ukusetshenziswa okuhlukile kwalezi zinto ezimbili akuhlale kulula futhi kunesizathu. Ngakho-ke, osokhemisi babahlanganisa baba umuthi owodwa, bekhetha imithamo efanelekile yokubambisana. Manje kuba sobala ukuthi kwezinye izimo ukusetshenziswa kwezidakamizwa ezihlanganayo kuyisimo esidingekayo sokulwa nokutheleleka.
Kepha kuphakama futhi ukungabaza: U-Augmentin noma uFlemoklav Solutab, yini okufanele ayikhethe ukwelashwa? Izindleko zesibili ziphakeme kancane, ingabe zisebenza kangcono? Ake sibheke ngemininingwane.
Zombili lezi zidakamizwa zinezithako ezimbili ezisebenzayo: i-amoxicillin ne-potasium clavulanate. Ukulinganiswa kokuqukethwe kwezakhi kucishe kufane kwifomathi ka-Augmentin nethebhulethi Flemoklav. U-Augmentin ngesimo samathebulethi uqukethe umthamo ofanayo we-clavulanic acid (125 mg) kumithamo ehlukahlukene ye-amooticillin (250, 500, 875 mg).
Ngokusekelwe kule mininingwane, kungathathwa ukuthi ukwakheka kwe-Augmentin kucindezela isenzo se-beta-lactamases ngokushesha nangokwengeziwe futhi kunciphisa ukugcwala kwe-amoxicillin, kunciphisa ukulimala kwayo emzimbeni.Kodwa-ke, izifundo ezisemthethweni zelebhu ngalesi sihloko azenziwanga. Kepha ngokuzethemba singasho ukuthi ukugxila okuphansi kwe-potassium clavunate e-Flemoklav kuzokwehlisa amathuba okusabela okungahambi kahle kule ngxenye.
I-Augmentin eyenziwe eBrithani iyatholakala ngefomu lokuzisongela noma ngendlela yamathebulethi e-oval enengozi yokuqhekeka maphakathi, ehlanganiswe nesilonda sokuhamba okulula emgudwini wokugaya ukudla. Umthamo wento ye-granular yi-125, 250, 400 mg, amaphilisi - 250, 500, 875 mg.
I-Flemoklav Solutab (Flemoklav Solutab) isidakamizwa saseDashi esitholakala kuphela kwifomu lethebhulethi. Qaphela ukuthi "uSolutab" kusho ukuthi amaphilisi ancibilikile. Uma befisa, bangahlanjululwa ngamanzi. Leli fomu likhona emhlabeni wonke futhi lithatha indawo yezixazululo noma ukumiswa. Njengo-Augmentin, kukhiqizwa ngemithamo ehlukahlukene kusuka ku-125 kuye ku-875 mg, okwenza kube lula ukukhetha umuthi kucatshangelwa ubudala besiguli nobunzima bokutheleleka.
Ngakho-ke, akunakwenzeka ukusho ngokungangabazi ukuthi imaphi amafomu alungele ukusetshenziswa.
Imiyalo yephepha yokulungiselela i-Augmentin inohlu olunemininingwane ethe xaxa yokusetshenziswa. Kepha ngokuvamile, imali iyafana ezinkombeni.
I-antibiotic yalolu hlobo inqunyelwe:
ekwelapheni izitho ze-ENT,
ekwelapheni kwezinqubo zokuvuvukala zamapheshana okuphefumula aphansi,
ngomonakalo wamagciwane esikhunjeni, izicubu ezithambile, amathambo namalunga,
ekwelapheni kokulimala okuthile kohlelo lwezitho zofuzo, ukuvuselelwa komsele wokubeletha, esikhathini sokusebenza,
ekwelapheni izifo ezithinta i-maxillofacial.
Ngokuvamile kunqunyelwe ukwelashwa kwe-sinusitis, i-otitis media, i-tonsillitis, i-tonsillitis, i-bronchitis, i-pneumonia ne-cystitis.
Yomibili le mishanguzo inokubekezelela okuhle, igxilwa ngokushesha epheshaneni lesisu. Ingxenye ye-antibacterial ikhishwa yizinso, i-clavulanic acid isuswa emzimbeni ngomchamo, indle nomoya ophelelwe yisikhathi.
Ubunzima bezinto ezisebenzayo bugcina bube nomphumela kuze kufike emahoreni ayisithupha, khona-ke ukusebenza kancane kancane kuyancipha. Izidakamizwa ziwela umgoqo we-placental futhi zitholakala ubisi lwebele lowesifazane.
Ngenxa yokubekezeleleka okuhle kwale mishanguzo, imiphumela emibi ebeka engcupheni impilo yabantu nokuphila ayivelakancane kakhulu kuyo yomibili le mishanguzo.
Imvamisa iziguli zikhononda ngezinkinga ezivela emgudwini wesisu: isicanucanu, ukuhlanza, izihlalo ezikhululekile, ukuthuthukiswa kwe-candidiasis emgodleni womlomo noma indawo esondeleneyo, kanye nokuvela kokungezwani komzimba - i-urticaria, ukulunywa, i-exanthema. Kukhona ukuthembela okuqondile kwezimpawu ezingafuneki ekwandiseni umthamo womuthi noma isikhathi sokwelashwa.
Ukusabela okungejwayelekile kwe-Augmentin noFlemoklav:
i-leukopenia, i-thrombocytopenia, i-anemia, i-eosinophilia,
ukwethuka kwe-anaphylactic, i-edema kaQuincke,
ikhanda, ukuqaqamba, ukukhathazeka, ukuqwasha,
Uma ukusabela okunamandla kwenzeka, umuthi kufanele unqanyulwe, ngokusebenza isikhathi eside, ubheke isimo sezinso nesibindi, uma kunesidingo, kunqunywa ukwelashwa kokulungiswa.
Umthamo oqondile wesidakamizwa se-antibacterial uhlala ukhethwa udokotela. Izincomo ezinikezwe emiyalweni zingasebenza kuphela njengolwazi lokubonisa.
I-Augmentin ngesimo samathebulethi ithathwa ngaphambi kokudla, iphilisi elilodwa lomthamo okhethiwe amahlandla ama-2 ngosuku.
Ukukhishwa okukodwa kwesidakamizwa ngokuxutshwa kwento esebenzayo ka-500 mg / 125 mg akufani nakabili kwezingu-250 mg / 125 mg. Kufanele uwuthenge umuthi ngqo kumthamo onqunywe ngudokotela.
Izingane ezingaphansi kweminyaka engu-12 ubudala zithatha lo muthi ngendlela yokumiswa kwawo, ubudala bawo kanye nezimpawu zesisindo somntwana, kanye nobunzima balesi sifo, kuyabhekwa. Iziguli zabantu abadala nazo zingaziphuca umuthi ngendlela enyibilikayo. I-Powder ye-400 mg ihambelana nethebhulethi ye-875 mg.
Isikhathi sokwelashwa kwe-Augmentin sisuka ezinsukwini ezi-5, isikhathi sokulashwa esingaphezu kwamaviki ama-2, ukuhlolwa kuyalawulwa bese kutholakala nezitho zangaphakathi zesiguli.
Indlela yokuthatha amaphilisi weFlemoklav Solutab iyafana: umthamo obekiwe uthathwa izikhathi ezintathu ngosuku ngaphambi kokudla. Ithebhulethi ingagwinywa iphelele noma ichithwe emanzini. Akunconyelwanga ukuhlafuna noma ukugaya ku-powder ukuze usamukele owomile.
Ukuvimbela ukukhula kwe-superinitness, ama-antibiotics athathwe ngokungqongqo ngokohlelo olunqunywe ngudokotela, ekugwemeni okushiwoyo futhi andise izikhathi zokuphuma kwesikhathi.
Lapho ukhetha umuthi obekiwe, udokotela unaka umlando wesiguli futhi unentshisekelo ngendlela yokuphatha ayithandayo. Njengoba ngokuqhathaniswa kwalezi zidakamizwa ezimbili, umehluko omkhulu okuzo.
Ngakho-ke, uma zingekho izingqinamba zokuthatha lokhu noma lokho kulungiswa futhi indlela yokusebenzisa ayinandaba kangako, iziguli zivame ukukhetha umuthi ngokuya ngezindleko zawo kanye nokutholakala kumakhemisi.
Zombili lezi zidakamizwa zitholakala ezindaweni eziningi kumithamo ehlukahlukene. Ngaso leso sikhathi, intengo ye-Augmentin iphansi kancane kune-Flemoklav Solyutab.
Amashalofu ekhemisi anikeza eziningi zalezi zidakamizwa. Eshibhe kunazo zonke lithwala igama elilula lokuhweba i-Amoxicillin + Clavulanic Acid futhi libiza cishe ama-ruble angama-70 ngephakeji ngalinye.
Intengo yazo yehluke kakhulu. Ngakho-ke, iClamox ingathengwa ngama-ruble angama-63, kanye ne-Arlet kusuka kuma-ruble angama-368.
Ukubuyekezwa nezincomo zochwepheshe
Izidakamizwa eziqukethe i-amooticillin ne-clavulanic acid zizibonakalise ngokwazo ukuphatha izifo ezahlukahlukene zomsuka wamagciwane. Udokotela ngamunye unegama lomkhiqizo alithandayo, elinqunywa kaningi.
Ukwakheka okunjalo empeleni akunikezeli imiphumela emibi futhi kubekezeleleka kahle ngisho nezingane zonyaka wokuqala wokuphila futhi kunezibuyekezo ezinhle ezivela kubazali beziguli ezincane.